Shaqaalaha daryeelka & codsiga guri ku
codsiga dhar Daabacaadda
codsiga Making Paper
codsi kale ee warshadaha
Company-dhigida ee FSAU
Unionchem waa qof ku taqasustay u-soo-saarka iyo iibinta kiimikada qaaska ah oo tayo sare leh. Our alaabta daboolayaa kala duwan oo hydrocolloids codsiyada ballaadhan waxaa ka mid ah cunto, la isku qurxiyo, daryeelka shaqaalaha, nadaafadda guriga, dhar, qaadashada waraaqaha, dhoobada, rinji & daahan, oilfield, macdanta, iwm. wax soo saarka kasta leh ka shaqeynayaan heer sare ah oo gaar ah ee adag, ganaax, gacanta rheology, flocculation, iwm ee ay codsiga si gooni gooni ah.
Waxaa naga go'an inaan sameeyo iyo siin tayo sare leh iyo waxyaabaha saaxiibtinimo deegaanka. wax soo saarka ayaa la socdo la ISO9001 system.Quality maaraynta tayada si adag ka wax ceeriin in design product.Production final iyo xarunta ay gacanta ku hayso waxaa sii si ay ula kulmaan Heerka caalamiga ah iyo kormeerka tayada iyo gacan ku haynta lab.equipped on site-soo-saarka. tayada wax soo saarka iyo adeega ay si fiican u ansixiyaan macaamiisha ee dibadda.
Waxaan kuu diyaarin gaadiidka lagu kalsoonaan karo oo degdeg ah & bixinta macaamiishayada. Product si ammaan ilaaliyo by packing.We tayada habboon sii kaydka kala duwan ee wax soo saarka our in our bakhaarka si loo hubiyo in bixinta waqtiga iyo ammaan.
Our koox khibrad leh macaamiisha shaqayn karaan iyagoo codsi gaar ah ama arrimo ka sooca farsamo iyo in ay soo gudbiyaan wax soo saarka habka la sawir iyo xogta, si wax ku ool ugu adeegno macaamiishayada waafaqsan wax soo saarka.
Iyada oo furitaankii buuxda oo ku saabsan waxyaabaha our, waxa aanu keentay in ay soo saaraha ugu xirfadeed iyo qeybiyaha in tayo sare leh, kharashka bixinta wax ku ool ah oo waqtiga.
NO.859 HEFEI WADDADA, Qingdao, Shiinaha
Water Treatment, Corrugation Starch Gum Powder, Leakoff Control, Screen Printing Paste, Condiments Soy Sauce, Oilfield Chemical ,